လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းများ (စုစည်းမှု-၂)
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလအတွင် ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်မြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း
အမှန်ကိုလုပ်ရတာဟာ အမှားကိုလုပ်ရတာထက် အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးကျတော့ အမှန်လုပ်တဲ့သူကသာ အောင်မြင်ရမှာပါ။ အမှန်တရားလုပ်တဲ့သူတွေကသာ ရှုံးရင်လည်း နိုင်ရမယ်။ နိုင်ရင်လည်း နိုင်ရမယ်ဆိုတာ ပြောလို့ရပါတယ်။ အမှန်တရားအရ မလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ ရှုံးရင်လည်း ရှုံးရမယ်။ နိုင်ရင်လည်း ရှုံးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး လိုချင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ တိုက်ခိုက်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆွဲဖြုတ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုဟာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ကင်းဝေးစွာနဲ့ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားနိုင်အောင်လို့ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်နေကြတာပဲ။ အားလုံးက ဒီအခွင့်အရေးလိုချင်ရင် အားလုံးက ၀င်ပြီးတော့ လှုပ်ရှားရမှာပဲ။ ကျမတို့ခေတ်မှာ ကျမတို့ ကုသိုလ်ကံကြောင့်မို့လို့ ဒီတိုင်းပြည် ပြည်သူလူထုကို အကြောက်တရားကနေပြီးတော့ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရလာတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။ ဒီလို ပြည်ထောင်စု အသစ်တည်ထောင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွှတ်လိုက်ရင် ကျမတို့ဟာ သမိုင်းပေးတာဝန် မကျေပွန်သူတွေအဖြစ် သမိုင်းမှာ အင်မတန်မှ အပြစ်တင်စရာဖြစ်မှာပါပဲ။ ကျမတို့က ပြည်သူလူထုကို အားကိုးတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးကြပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်မသေးကြပါနဲ့။ လူထုရဲ့ အင်အားဆိုတာ အင်မတန်မှ ကြီးပါတယ်။ လူထုရဲ့အင်အားကို မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ကျမတို့ကလည်း လေးစားတယ်၊ နောင်လည်း အစိုးရအဆက်ဆက်က လေးစားသင့်တယ်။ ပြည်သူလူထုကို လေးစားတဲ့ အစိုးရမျိုးကို ကျမတို့က ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ တိုင်းပြည်လည်း အကျိုးရှိမယ်။ ပြည်သူလူထုလည်း စိတ်ချမ်းသာပါမယ်။
Posted by freeburma at 10:11 PM0comments
Labels: DASSK's Speech
လူ့ဘ၀ ဖြစ်တည်ခြင်းမှအစပြု၍ လူသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးတို့တွင် လူမျိုးဘာသာမရွေး တညီတညွတ်တည်း တူညီသော စိတ်ခံစားမှုများနှင့် ထိုစိတ်ခံစားမှုတို့မှ လွန်ကဲထင်ဟပ်လာသော အမှတ်အသားသင်္ကေတအဖြစ် အမူအကျင့် နှစ်မျိုးရှိလေသည်။
၎င်းတို့ကား ၀မ်းသာကြည်နူးခြင်းနှင့် ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊ ၀မ်းသာကြည်နူးမှုကြောင့် ရယ်မောပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ၀မ်းနည်းကြေကွဲ မှုကြောင့် တမ်းတငိုကြွေးခြင်းတို့ပင်။
တခါတရံတွင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုကြောင့် တမ်းတငိုကြွေးနေသူတို့၏ နောက်ကွယ်မှာပင် 'စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း' နှင့် 'ပူပင်သောက ဗျာပါဒ' ဟူသော နှောင်ကြိုးများက ရစ်ပတ်တုပ်နှောင်လျက်ရှိကြသည်။
ထိုနှောင်ကြိုးများကို ဖြေလျှော့ဖြတ်တောက ဖယ်ရှားပေးနေကြသူတို့သည်ကား . . . . . . ။
' ဘဘ ဆေးရုံတက်တုန်းက သေအံ့ဆဲဆဲ လူမမာအဘွားအိုတစ်ယောက်နဲ့ ၀ိုင်းပြုစုနေကြတဲ့ သားသမီးတွေကို တွေ့ရတယ်။ အမယ်အိုကို မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့လို့ ဆရာဝန်က အိမ်ပြန်သယ်ကြဖို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ သားသမီးတွေက အိမ်မှာ နေရာထိုင်ခင်း ပြန်စီစဉ်ပါရစေဦး။ ပြီးတော့ လာခေါ်ပါ့မယ်လို့ပြောပြီး ထွက်သွားလိုက်ကြတာ အမယ်အိုသာ ကွယ်လွန်ပြီး သုံးရက်ကျော်တဲ့အထိ လာမခေါ်ကြလို့ ဆေးရုံကနေ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ရတယ်ကွယ်။ သားသမီးတွေက သင်္ဂြိုဟ်စရိတ်မတတ်နိုင်လို့ ထွက်ပြေးကြတာပါကလားလို့ သိလိုက်ရတော့ ဘဘ ရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာ . . . '
၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် ဆရာကြီး ဦးသုခက ကျမကို ပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
' တချို့ကလည်း သားသမီးတွေကို အပြစ်တင်ကြတာပေါ့ကွယ်။ ကိုယ့်မွေးသမိခင်ကြီးကို ဒီလို လုပ်ပစ်ခဲ့ရပါ့မလားလို့။ ဘဘ ကတော့ အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူးကွယ်။ ခမျာများ ဘယ့်ကလောက် ဆင်းရဲကျပ်တည်းပြီး သင်္ဂြိုဟ်စရိတ်ကလေးမှ မတတ်နိုင်ကြလို့ ရှိမှာပေါ့ဆိုပြီး ဒင်းတို့ကလေးတွေနေရာကနေ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်မိတယ်။ ကိုယ့်မအေအလောင်းလေးတောင် ရဲရဲလာမကြည့်ဝံ့ကြ၊ မသင်္ဂြိုဟ်ပေးကြရတဲ့ သူတို့ရင်ထဲ ဘယ်လောက်များ ကြေကွဲနေရှာကြပါ့မလဲလို့ '
ဘဘဦးသုခ၏ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်နှင့် အကြောင်းအရာက ကျမ၏ နှလုံးသားသို့ပါ ကူးစက်တောက်လောင်တော့သည်။ အကယ်၍သာ ထိုသားသမီး၊ မိသားစုတို့က သင်္ဂြိုဟ်စရိတ်ကို ချေးငှားရှာဖွေ၍ သင်္ဂြိုဟ်သည်ထား၊ လိုအပ်သည့်ငွေကို လိုအပ်သည့် အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း ရနိုင်ပါမည်လား။ သက်မဲ့ခန္ဓာအိမ်ဆိုသည်ကား အချိန်နှင့်အမျှ ဖောက်ပြန်လေတော့မည်။ လိုအပ်သည့် ငွေကို ချေးငှားရှာဖွေ၍ ရသည်ဆိုပြန်တော့ ထိုငွေကို ပြန်မဆပ်နိုင်မချင်း စိတ်သောကရောက်ရမည်၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ဖြစ်ရမည်၊ သောကမီး တောက်လောင်ရမည်။ ထိုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိကြသူများနှင့် ဘဘ ဦးသုခတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့လာ ကြခြင်းသည် ကျမတို့ ၀န်းကျင်အတွက် စေ့ဆော်မှုတစ်ခုကို ဖြစ်တည်စေသည်။
'တခြားဘာသာတွေမှာ နာရေးဖြစ်လာရင် သင်္ဂြိုဟ်မှုကို အကူအညီပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိကြတယ်။ ဘဘတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဒါမျိုးမရှိသေးဘူး။ မန္တလေးမှာတော့ ဗြဟ္မာစိုရ်အသင်းဆိုပြီး နာရေးကိစ္စတွေ အကူအညီပေးနေတာ တော်တော်လေး အောင်မြင်နေပြီ။ ဘဘတို့ ရန်ကုန်မှာလည်း ရှိသင့်တယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာ တို့များ နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ဖွဲ့ကြရအောင်။ အဲဒီကျရင် အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်လိုတဲ့သူမျိုးတွေ အများကြီးလိုလာပြီ သမီးရေ'
ဘဘဦးသုခသည် ကျမကိုပြောပြသော ထိုစကားစုတွေကိုပဲ မမောနိုင်မပန်းနိုင် ထပ်တလဲလဲနှင့် လူပေါင်းများစွာကို ပြောနေ လိမ့်ဦးမည်ဟု ကျွန်မ အသေအချာယုံကြည်သည်။
'လူဆိုတာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့စိတ်နဲ့ အများအတွက် အနစ်နာခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးမှ မရှိရင် အခြားသတ္တ၀ါတွေနဲ့ ဘာများထူးဦးမှာလဲ' ဟူသည့် သဘောတရား စကားစုတစ်ခုကို ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းယု၏ 'မွှေး' ၀တ္ထုကို ဖတ်ဖြစ်သည့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း များစွာကပင် ကျမ စွဲနစ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်ကာလမှစတင်၍ 'ကိုယ်ကျိုးစွန့်၍ အများအတွက် အနစ်နာခံသူ' ဟူသည့် လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို ကျမ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ရှာဖွေနေမိခဲ့သည်မှာ ယခုအချိန်တွင်တော့ ပြည့်ဝစွာ အဓိပ္ပာယ်ရှိနေခဲ့ပြီဟု ဆိုရမည်ထင်သည်။
ကျမ၏ စိတ်အာဟာရကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြသော ထိုလူနည်းစုထဲတွင် ပြည်သူအများ လေးစားအားထားသော နာရေးကူညီမှု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပေသည်။
' ရန်ကုန်မြို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး ပထမဦးဆုံး နာရေးကူညီမှုပြုခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာ့ပန်းပုပညာရှင် ဆရာကြီး ဦးဟန်တင်၏ ဈာပနကို မြန်မာအနုပညာရှင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ ကိုကျော်သူက နာရေးယာဉ်ကို ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်၍ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ '
ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ လူမျိုးဘာသာ မရွေး အခမဲ့ အကူအညီပေးမည်ဟူသော အသင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆရာကြီးဦးဟန်တင် ကဲ့သို့သော ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတို့၏ တဖန်ပြန်လည်လှူဒါန်းငွေများဖြင့်လည်း ငွေကြေးချို့တဲ့နွမ်းပါးသူတို့၏ နာရေးကိစ္စများတွင် အားဖြည့်သုံးစွဲခွင့် ရခဲ့သည်။
ဆရာကြီး ဦးသုခ၏ အိပ်မက်နှင့် မန္တလေး ဗြဟ္မာစိုရ်အသင်းကြီး၏ လမ်းပြမှုမှ အကောင်အထည်ပေါ်လာသော 'ရန်ကုန်မြို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း' ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတွင် လူတန်းစားမျိုးစုံ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာကြီးများ၊ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေသူများ၊ ကုန်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ လက်လုပ်လက်စားများ၊ စသည့် လူတန်းစား အမျိုးအမည် မညီမျှကြသော်လည်း တခဲနက်ညီညွတ်ခြင်းကား 'ကိုယ်ကျိုးစွန့်' သည့် စိတ်ဓာတ်များပင်ဖြစ်သည်။ အဓိကလိုအပ်ချက်သည်ကား ထို 'တန်ဖိုး' သာဖြစ်ပေသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် ဒဏ်ရာမရဖူးပါဘဲနှင့် သူတစ်ပါး၏ အမာရွတ်ကို စုတ်သပ်ရကောင်းမှန်းသိသော နှလုံးစိတ်ဝမ်း ကျယ်ပြန့်သူတို့ကား စွန့်လွှတ်နိုင်စွမ်းအား ကြီးမားလှသည်။ ထိုသူများ၏ လှူဒါန်းငွေဖြင့် အသင်းကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပြီး လူပေါင်းများစွာ၏ နာရေးကိစ္စတို့ကို အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့သည်မှာ သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်နှစ်တာကာလသို့ပင် ချဉ်းကပ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်နှင့် အမျှ အကူအညီတောင်းခံလာသူများလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ များပြားလာကြပြီဖြစ်သည်။
စွန့်လွှတ်ကြသူများတွင် ငွေအင်အား၊ လူအင်အားတင်မက ဓာတ်ဆီလှူသူ၊ မြေကွက်လှူသူများပင် ရှိလာ၍ မုဒိတာပွားနေခိုက်တွင် လုံးဝ မျှော်လင့်မထားသော စိတ်လှုပ်ရှားကြည်နူးဖွယ်ရာ စံပြပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုလည်း တွေ့ကြုံကြရသေးသည်။ ၎င်းတို့သည်ကား ညောင်ပင်လေးဈေးမှ ဈေးသူဈေးသားများပင်။
ကျမတို့အသင်းအနေဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ထိုမျှငွေကိုသော်လည်းကောင်း၊ မော်တော်ယာဉ် အစီးလိုက်ကိုသော်လည်းကောင်း လက်ခံရယူဖူးခြင်းမရှိသဖြင့် ထိုအတွေ့အကြုံကား အစွမ်းကုန် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်တော့သည်။ လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဈေးသာယာရေးဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ထွန်း၏ . .
' အများပြည်သူတွေရဲ့ နာရေးကိစ္စကို အကူအညီပေးဖို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းကို မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းရခြင်းဟာ ကျနော်တို့ ဈေးကို လာရောက် ၀ယ်ယူအားပေးနေကြတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ထမင်းရှင်လုပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးကိုဆပ်တယ်လို့လည်း ခံယူပါတယ် '
ဆိုသည့် စကားကလည်း လေးစားမှတ်သားဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ စေတနာသဒ္ဓါတရား ထက်သန်ကြလေသော အလှူရှင်များ ပေါ်ပေါက်လာလေလေ ကျမတို့အသင်းကြီး၏ ရပ်တည်ရှင်သန်မှု ဖွံ့ထွားလာလေလေ၊ အသင်းအပေါ် အကူအညီတောင်းခံသူ များပြားလာလေလေ၊၊ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သူတို့ အတွက် တာဝန်ကြီးလာလေလေပင်ဖြစ်သည်။ အသင်းအနေဖြင့် နာရေးကိစ္စရပ် များအတွက် အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းငွေများကို နာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်သည့် နေရာတို့မှအပ အခြားနေရာတွင် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ သုံးရန် အခွင့်အလမ်းမရှိအောင် တင်းကျပ်သော စည်းကမ်းများဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ပရဟိတစိတ်ဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ လာရောက်လုပ်ဆောင်ကြသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကော်မတီဝင်များအားလုံးသည် မိမိ၏ တကိုယ်ရေ ၀န်ဆောင်စရိတ်တွင်မက အသင်းမှ အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သော အလှူအတန်း၊ အခမ်းအနားများနှင့် လိုအပ်သော အသုံးအဆောင်များ ၀ယ်ယူရာတွင်ပင် အချိုးကျထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထူထောင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ အများနှင့်စပ်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်း အသင်းအပင်းများတွင် အဓိက လိုအပ်ချက်သည်ကား အများပိုင်ငွေကို အလွဲသုံးစားပြုမူခြင်း ကင်းရန်နှင့် လူမှုရေးရှုပ်ထွေးဖောက်ပြန်မှု ကင်းရှင်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အသင်းအပေါ် အထင်ကြီး၊ လေးစားစွာ စိတ်ပါဝင်စား လေ့လာသူများထဲတွင် အထူးဂရုပြုမိသူအချို့ကိုလည်း တွေ့ကြုံရသည်။
တစ်နေ့တွင် ကလျာမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွင် ဆရာမ (ဒေါ်) ကလျာ (၀ိဇ္ဖာ/သိပ္ပံ) ၏ ချိန်းဆိုပေးမှုကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာမြို့မှ ပရော်ဖက်ဆာ ဘာသာပြန်ဆရာမ Mirori Inouye Minamida (မြန်မာအမည် မပန်းခက်) နှင့် တွေ့ဆုံဖြစ်သည်။ ဆရာမ မပန်းခက်နှင့်အတူ Ruriko Unno နှင့် Yo Natsu Ki အမည်ရှိ ဂျပန်စာရေးဆရာမတစ်ဦးနှင့် ပန်းချီဆရာမလည်း ပါလာခဲ့သည်။ စကားဝိုင်းအစမှာပင် မပန်းခက်က . . .
' ဆရာမရေ . . ဟောဒီ စာရေးဆရာမက မကြာခင်ကမှ သူ့ယောက်ျား ကွယ်လွန်သွားလို့ သိပ်ပြီးခံစားနေရတယ်။ အခုတော့ သူဟာ သေခြင်းတရားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်လို့ နာရေးကိစ္စတွေ အကူအညီပေးနေတဲ့ ဆရာမတို့နဲ့ တွေ့ရအောင် ခေါ်လာတာပါ။ '
ဆိုတော့ ကျမရော မမ၀င်း (ဒေါ်ကလျာ) ပါ အံ့သြသွားသည်။ ပြီးတော့မှ ကျမက . .
'သေခြင်းတရားဆိုတာက လူသားအားလုံးအတွက် တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြရမယ့် အကြောင်းတရား တစ်ခုပဲလေ။ အဲဒီကိစ္စအတွက် ဆရာမတို့က ဘာကို လေ့လာချင်တာပါလဲ'
လို့မေးတော့ . . .
' မိသားစုထဲမှာ လူတစ်ယောက်သေသွားရင် ကျန်တဲ့သူတွေက တအားကို ၀မ်းနည်းကြေကွဲပြီး ကျန်ရစ်ရတယ်။ အဲဒါမျိုးက မကြုံဖူးတဲ့သူတွေအတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်နေတယ်။ ဆရာမတို့က အသုဘတွေကို လိုက်ပြီး ကူညီနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်အရွယ်လူမျိုးတွေ ဘာရောဂါနဲ့ သေကြသလဲ၊ သူတို့မိသားစုတွေရော ဘယ်လိုရှိကြလဲ၊ ဆရာမတို့ရော အဲဒါတွေကို ခဏခဏ တွေ့နေရတော့ စိတ်မညစ်ဘူးလား၊ ဆရာမရော မငိုချင်ဘူးလား၊ ဆရာမတို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းက အဲဒီလူတွေကို ဘာလုပ်ပေးနေတာလဲ '
စသည့် မေးခွန်းများနှင့်တကွ နောက်ဆက်တွဲ မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို ကျမတို့ ဖြေရပါတော့သည်။
သေခြင်းတရားဟူသည် အသက်အရွယ် ကြီးငယ်မရွေး တွေ့ဆုံရင်ဆိုင်ရသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုမို့ ကျမတို့ ကူညီနေရမှု အတွေ့အကြုံတွင် တစ်ရက်သားကလေးမှစ၍ သက်ကြီးရွယ်အိုများအထိ ရှိကြောင်း၊ နာရေးကိစ္စကြောင့် ပူဆွေးသောက ရောက်နေကြသော ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့၏ ပြုဖွယ်တာဝန်များကို ကျမတို့အသင်းမှ ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ထိုမိသားစုတို့အတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ပေါ့ပါးသွားကြောင်း၊ နာရေးကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာ၍ အကြောင်းကြား အကူအညီ တောင်းခံသည်နှင့် နာရေးယာဉ်ပေါ်တွင် အလူမီနီယမ်ခေါင်းပါတင်၍ အအေးခန်းထားလိုသူ၊ မီးသင်္ဂြိုဟ်လိုသူ၊ ပထမရက်များတွင် အအေးခန်းထား၍ နောက်ရက်တွင် မီးသင်္ဂြိုဟ်သူစသည့် ကိစ္စများကို အခမဲ့ ကူညီမှုပေးမှုပြုကြကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးတွင် ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်နောက်လိုက် ၀န်ထမ်းများနှင့်အတူ လုပ်အားပေး ဈာပနကော်မတီဝင် တစ်ဦးပါ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိကြောင်း ဖြေကြားသည်ကို ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နှင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ နားထောင်နေကြပါသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်တွေ့လေ့လာချင်သော ထိုဆရာမ သုံးယောက်တို့သည် နောက်တစ်နေ့၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ၁၆/၂ သုဒဿနလမ်းမရှိ ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ၏ ဗြဟ္မာ့ဝိဟာရ စာသင်တိုက် အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာကြပြန်သည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျမတို့အသင်းတွင် တာဝန်ကျ ဈာပနကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းနှင့် နာရေးမော်တော်ယာဉ်ကို ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ရန် အသင့်ရှိနေသော ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ ကိုကျော်သူ၊ ၎င်း၏ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့နှင့် တွေ့ဆုံကြပြီး ဈာပနသယ်မည့်လမ်းကြောင်းတွင် လေ့လာရန် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကားကလေးနှင့် ကိုကျော်သူမောင်းနှင်ပြီး ဈာပနကော်မတီဝင် ကျမ လိုက်ပါလာသော နာရေးကူညီမှုအသင်း အမှတ်တံဆိပ်ပါ မော်တော်ယာဉ်၏ နောက်မှ လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။
ထိုနေ့တွင် ကျမတို့ သွားရောက်သယ်ယူရမည့် ပထမဆုံးလမ်းကြောင်းက တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၁၄၀) ရပ်ကွက်အတွင်းမှ အသက် (၃၁) နှစ် အရွယ်ရှိ ကိုတင်မောင်ဝင်းဆိုသူ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ဖြစ်သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း ရုံးတည်ရှိရာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းမှ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ အမှတ် (၁၄၀) ရပ်ကွက်သို့ နာရီဝက်ခန့် မောင်းနှင်ပြီးသောအခါ ဆိုးဝါးသော လမ်းပန်းအခြေအနေကြောင့် ကိုကျော်သူမှာ ကားကို ဆက်၍ မောင်းနှင်ရန် မတတ်နိုင်တော့သဖြင့် ရပ်ကွက်အ၀င် မြေနီလမ်းဘေးမှ ချိုင့်နှုတ်ခမ်းတစ်ခုတွင် ကားကို ထိုးရပ်လိုက်ရသည်။ ကားရှေ့ခန်းမှ ကျမဆင်းပြီး နောက်ဘက်သို့ မျှော်ကြည့်သောအခါ မပန်းခက်တို့ကားလည်း ဆက်ဝင်၍မရတော့သဖြင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာပင် ရပ်တန့်ပြီး ကျမတို့ကားရှိရာသို့ ဆင်းလာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
' ကျနော်တို့ရပ်ကွက်က ကားဝင်လို့မရဘူး။ ဟိုးရှေ့က မြင်နေရတဲ့ သစ်ပင်အုပ်အုပ်ကလေး ရှိတဲ့နေရာအထိ သွားရမှာမို့ အရမ်းဝေးနေသေးတယ်။ ဆိုက်ကားနဲ့သွားမှရမယ်။ '
နာရေးယာဉ်အား လာရောက်ကြိုဆိုနေသော ရပ်ကွက်အတွင်းမှ လူတစ်ယောက်ယောက်၏ သတင်းပေးမှုဖြင့် ဆိုက်ကားများငှား၍ ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှ ရုပ်ကလာပ်ထည့်ရန် ခေါင်းအလွတ်ကိုပါ ယူချ၍ ဆိုက်ကားပေါ်တင်ခဲ့ကြသည်။ အပြန်ခရီးတွင်တော့ ထိုအခေါင်းတွင် ရုပ်ကလာပ်ထည့်သွင်းပြီး လူအင်အားများများဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ရှိရာသို့ အရောက်ထမ်း၍ လမ်းလျှောက်သယ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက လမ်းကြမ်းကြမ်းတွင် အဆမတန် လှုပ်ရှားဗြောင်းဆန်သည့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်မည် မဟုတ်။
ခနော်ခနောနဲ့ ချိုင့်ခွက်များစွာကို ဖြတ်သန်းပြီး လမ်းကျဉ်းကျဉ်းကလေးတစ်ခု၏ ဘေးမှ ၁၀ ပေ ပတ်လည်ခန့်သာ အများဆုံးရှိမည်ဟု ထင်ရသော ခပ်ယိုင်ယိုင် အိမ်ကလေးတစ်လုံးဆီ အရောက်တွင် ခေါင်းကို အိမ်ရှေ့မှာ ခဏချပြီး ကျမတို့ အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ကြသည်။
ကွယ်လွန်သူ၏ဘေးတွင် ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေရှာသော အသက်နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကား နာရေးရှင်ဖြစ်သည်။ ကျမက တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း သင်္ချိုင်းလက်မှတ် စာရွက်စာတမ်းကို လက်ခံရယူပြီး အသက်သုံးဆယ့်တစ်နှစ် အရွယ်သာရှိသေးသော ကိုတင်မောင်ဝင်းဆိုသူ၏ ပိန်လှီဖျော့တော့နေသော ရုပ်ကလာပ်နှင့် နာရေးရှင်မိန်းကလေးကို ဆက်စပ်မေးမြန်းတော့ ကျန်လူများပါ စိတ်ဝင်စားစွာ ခံစားကြေကွဲနေကြသည်။
' သူက ကျမရဲ့ယောက်ျားပါ။ နှလုံးရောဂါလည်းရှိပါတယ်။ အခုတော့ နဂိုရောဂါအခံရော အာဟာရပြတ်တာပါ ပေါင်းပြီး ဖြစ်သွားတာပါ '
' သားသမီးရော မရှိဘူးလား '
' သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ မနှစ်ကပဲ ဆုံးသွားပါတယ်။ အခုတော့ ဖအေရော သမီးရောက ကျမကို လူ့လောကမှာ တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ သားအဖတွေ သိပ်ရက်စက်တယ် '
ပြောပြောငိုငိုနှင့် ဖြစ်နေသော မိန်းကလေးကို . . .
' ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ် ' ဟူသော မှတ်ချက်တစ်ခုမှလွဲ၍ ရုတ်တရက် ဘာမှပြန်မပြောနိုင်။ ပြုဖွယ်ကိစ္စများဖြစ်သော အခေါင်းကို အိမ်ပေါ်တင်၍ ယာဉ်နောက်လိုက်ဝန်ထမ်းနှင့် အရပ်ထဲမှ လူငယ်များ အကူအညီဖြင့် ရုပ်ကလာပ်ကို ခေါင်းထဲထည့်ခြင်း၊ သယ်ယူရန် အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ကိစ္စ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရသည်။
အလောင်းကို မြေနီလမ်းကလေးပေါ်သို့ သယ်ယူကြပြီး ထွက်ခွာရန် ပြင်သောအခါကျမှ ကျမ သတိတရဖြင့် ပါလာသော ဧည့်သည် ဂျပန်အမျိုးသမီးများကို လှည့်ကြည့်ဖြစ်တော့သည်။
ထိုသောအခါဝယ် ဂျပန်အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမကြီးသည် နာရေးရှင် မုဆိုးမငယ်ငယ်ကလေးအား ပုခုံးကိုဖက်ကာ တရှုံ့ရှုံ့ ငိုကြွေးနေသည်ကို တွေ့ရပါလေသည် ။ ။
Posted by freeburma at 9:46 AM0comments
သနားလိုက်တာဗျာ . . .
ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်၊ လူကို လူလိုဆက်ဆံတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို တောင့်တနေကြတဲ့ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြဆဲ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးရည်တိုက်ပွဲကြီးဟာ ပန်းတိုင်ကို မရောက်မချင်း ဆက်လက်ချီတက်နေမှာပါ။
ဒီခရီးရှည်ကြီးမှာ ကျနော်တို့ဟာ အကြိမ်ကြိမ် ယိုင်ဆင်းပြိုလဲခဲ့ရတယ်။ ပြန်လည်ထူမတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ပိုမို ခိုင်မာလာခဲ့တယ်။ မျက်ရည်တွေ၊ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေကို လူမသိသူမသိ အသြတြသူရဲကောင်းများအဖြစ် ရဲရဲရင့်ရင့် ပေးဆပ်ခဲ့ကြပြီ။ ကြောက်ရွံ့အောင် ဖိနှိပ်ထားတဲ့ လူသတ်ကောင်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု အကြောက်တရားတွေကို တွန်းလှန်ရင်း ကျနော်တို့ ရဲရင့်ခဲ့ကြပြီ။ နောက်ဆုတ်ဖို့ ဖိအားပေးခံရတိုင်း ရှေ့ကိုတစ်လှမ်းထပ်တက်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ အားမွေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
၈၈ တုန်းက ကလေးသာသာအရွယ်သာရှိသေးတဲ့ လက်ရှိ ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးမှုအောက်မှာ မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက် လမ်းကြောင်းပျောက် မှုန်ဝါးသွားခဲ့ပြီလို့ အများက သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပေမယ့် အချိန်တန်တော့ နွားပိန်ကန်ခဲ့ပါပြီ။
ဖိနှိပ်မှုများအောက်မှာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့အခါမှာ လမ်းကြောင်းတွေဟာ ထင်သာမြင်သာမရှိပေမယ့် မတရား ဖိနှိပ်မှုများက အမှန်တကယ်ကို ရှိနေခဲ့တာကိုတော့ လူတိုင်းက မြင်နိုင်ခဲ့တာပဲလေ။ ဖိနှိပ်မှုများရဲ့ ရိုက်ချက်ကို တိုက်ရိုက်မခံခဲ့ရဖူးသေးတဲ့ ကျနော့်လို လူမျိုးတောင်မှ လူကို လူလိုဆက်ဆံတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို၊ ဒီမိုကရေစီကို၊ လူ့အခွင့်အရေးကို အဲဒီလောက် လိုလားတောင့်တနေရင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ နင်းပြားဘ၀တွေအဖြစ် ဆက်ဆံခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေက ဘာဖြစ်လို့ မလိုချင်ရမှာလဲ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့ မနက် အိပ်ရာထတာနဲ့ ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကတော့ မင်္ဂလာရှိသလား မရှိဘူးလားဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေကို ကြောက်ခမန်းလိလိ မြှင့်တင်လိုက်ပြီတဲ့။ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ရှင်သန်နေရတဲ့ ကျနော်တို့အတွက် ပြောင်းပြန်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ စကားတွေသာ ကြားရဖန်များတော့ ပြောင်းပြန်ပြောမှ၊ ပြောင်းပြန်အဓိပ္ပာယ်ယူမှ အမှန်ကို ရှာတွေ့နိုင်တော့ အဲဒီနေ့အတွက် မိတ်ဆွေအချင်းချင်း လမ်းမှာတွေ့လို့ နှုတ်ဆက်ရင်ကို မင်္ဂလာရှိသောနေ့ပါ လို့ မချိပြုံးတွေနဲ့ …… အံကိုတင်းတင်းကြိတ်လျက် ……
ပြည်သူတွေကို ကျွန်သဘောက်လိုဆက်ဆံနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် အာဏာရူးတွေရဲ့ ကမူးရှူးတိုး လောဘတကြီးနဲ့ ငါ့ဖို့တဖို့သာသိတဲ့ လုပ်ရပ် ……………
ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာ ကြိုတင်တွက်မထားဘဲနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမယူထားဘဲနဲ့ ဒီအာဏာရှင်တွေဟာ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုမလုပ်ရဲပါဘူး။ အခု လုပ်ချလိုက်ပြီဆိုတော့
တကယ့်ကို တွက်ရေးနဲ့ စက်သူဌေးဖြစ်ကိန်း။ သူတို့ ပြောသလိုဆို ဘာတဲ့။ သား ရွှေအိုးထမ်းလာတာ မြင်ချင်ပါတယ်တဲ့။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်၊ သုံးချက်ပြတ် ….
အဲဒီ နအဖ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ပထမဆုံး ဆိုးဆိုးရွားရွား အမှားကတော့ ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ပိတ်လှောင်နေတဲ့ မာန်မာနပါပဲ။ ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို မျက်စိတဆုံးပဲ ကြည့်ပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ချလိုက်တာပါပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူးဟေ့ ဆိုပြီး လုပ်ချလိုက်တာ …….. နောက်တနေ့ကျတော့ အဓိကမီးပွားဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လိုင်းကားတွေရဲ့ ယာဉ်စီးခကို မထသ က တရားဝင်ကို မြှင့်တင်လိုက်တာ . . . .
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဦးဆောင်၍ စတင်ထွက်လာပါပြီ။ တွေ့လား သူတို့ ၀င်ကိုတိုးမယ် ဆိုတာ။ ဖမ်းလိုက်။ အကုန်လုံးကို ဖမ်း၊ ပြီးတော့ သတင်းစာမှာ ထုံးစံအတိုင်း စကားလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်လိုက်။ လာအုံးမှာ နောက်ထပ် ဖမ်းဖို့ ဆီးဖို့ ရိုက်နှက်ဖို့ ပြင်ထား။
(တကယ့်ကို သူဆင်တဲ့အကွက်ထဲကို ၀င်တုန်းပါပဲ။)
ဟော တကယ်ကို ပြည်သူ့အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေ သြဂုတ်လ တလျောက်လုံး တန်းစီပြီး ထွက်လာလိုက်ကြတာ။ ဖမ်း … ဖမ်း … သိမ်းကျုံးပြီးတော့ကိုဖမ်း … ကုန်ရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ်။
ခွပ်ဒေါင်းမျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေအတွက် ဘာလုပ်ရမလဲ မမေးနဲ့။ လှုပ်လှုပ်အခြေအနေတွေ့ရင် ပထမဆုံး ကားတွေစီစဉ်ပေးလိုက်။ အဲ .. အခြေအနေ မကောင်းရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာ။ သိမ်းကျုံးပြီးတော့ကို စစ်ကြောရေးမှာ ပညာပေးလိုက်။ ငါတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလည်း ဖမ်းပြီးသား။ ဆီကနေရတဲ့ ငွေတွေကိုလည်း အိတ်ထဲ ကျုံးထည့်ရုံပဲ။ နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့ကွာ။
(ကဲ . . ဘာလိုသေးလဲ။ အဆင်ကို ချောလို့။)
အဲ . . လာပါပြီ ။ စစ်တွေမှာ သံဃာတွေ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပြီး စီတန်းလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့။ ပခုက္ကူမှာလည်း ထို့အတူ။ သူတို့ဆင်ထားတဲ့ အကွက် မဟုတ်တဲ့ သူတို့ မမျှော်မှန်းထားတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဓိက ကိုးကွယ်အားထားရာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာများမှ ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ အပူမီးတွေငြိမ်းစေဖို့ မေတ္တာသုတ်၊ မောရသုတ် စတဲ့ ပရိတ်တွေ ရွတ်ဖတ်သရစ္ဖျာယ်ပြီး မြို့ထဲမှာ စီတန်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ လုပ်မိလုပ်ရာလို့ပဲ ပြောပြော၊ လုပ်နေကျအလုပ်လို့ပဲပြောပြော သူတို့ရဲ့ ရာထူး၊ အာဏာ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတည်မြဲဖို့ဆိုရင် လူသတ်ဖို့ကို နည်းနည်းမှ နောက်မတွန့်တဲ့၊ အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်နေတဲ့၊ သွေးစွန်းနေတဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တပွဲထိုး အကြံကြီး ကြံတော့တာပါပဲ။ ပခုက္ကူကစပြီး သူတို့ဆင်ထားတဲ့ အကွက်ကို စတင်သွေဖည်ပြီး လုပ်ရတော့တာပါပဲ။
(၁) ပခုက္ကူမှာ မေတ္တာသုတ် စတဲ့ ပရိတ်တွေ ရွတ်ဖတ်သရစ္ဖျာယ်ပြီး ကြွချီလာကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို လမ်းကနေပိတ်ဆို့ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြောက်လှန့်ပြီး သံဃာ့အုပ်စုကို ဖြိုခွဲ၊ သံဃာတော်တွေကို လက်ကိုင်တုတ်တွေနဲ့ ဖမ်းဆီး၊ ဓာတ်တိုင်မှာ ကြိုးတွေနဲ့ တုတ်ချည်ပြီး ရိုက်နှက်။
(၂) နောက်တနေ့ကျတော့လည်း တောင်းပန်ဖို့ နေနေသာသာ သူတို့ကပဲ အပြစ်ကျူးလွန်ပြီး တပြန် စီးစီးပိုးပိုး သံဃာတော်တွေကို ထိန်းဖို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တွေကို လာပြီး အမိန့်ပေးသတဲ့ဗျား။
(၃) ဗုဒ္ဓဘုရား သာသနာတော်ကြီးကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေဟာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် ချမှတ်တော်မူခဲ့တဲ့ သာသနာအဓွန့်ရှည်စေကြောင်း စည်းကမ်းဥပဒေအတိုင်း သာသနာကို စော်ကားတဲ့၊ ဘုရားသားတော်များကို မထီမဲ့မြင် စော်ကားရိုင်းပြတဲ့ လူ့အန္ဓတွေကို သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်၍ အစိုးရအား တုံ့ပြန်ရန် (၁၀) ရက် အချိန်ပေးထားပြီး လိုက်လျောခြင်း မရှိပါက စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်မှစ၍ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်မည်ဟု သံဃာများက မိန့်ကြား၍ အောက်ပါအချက်လေးချက်ကို ကြေငြာချက်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
- နအဖစစ်အစိုးရမှ ပခုက္ကူသံဃာတော်များအား ကျေးအေးခွင့်လွှတ်သည်အထိ ၀န်ချတောင်းပန်ရန်
- လက်ရှိမြင့်တက်နေသော ကုန်ဈေးနှုန်း လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ ချက်ချင်း လျော့ချပေးရန်
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးနှင့် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကို ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးရန်
- လူထု၏ အထွေထွေအကျပ်အတည်းများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် နအဖစစ်အစိုးရမှ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ချက်ချင်းပြုလုပ်ပေးရန်။
အထက်ပါ ဖြစ်စဉ် (၃) ရပ်တွင် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုအပေါ် စိတ်ကောင်း၊ စေတနာကောင်း၊ နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် မဖြေရှင်းချင်လျှင်တောင်မှ နအဖအနေနဲ့ လူလည်၊ လူနပ်၊ လူညစ်နည်းများဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့မည်ဆိုလျှင် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှစ၍ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းအား ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ရာမှ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော ဘီလူးမျက်နှာအား အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဖုံးထားနိုင်ပေလိမ့်အုံးမည် ဖြစ်သည်။ အခုတော့ ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန်မာနတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို မျက်စိတဆုံးပဲ ကြည့်ပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လူမိုက်လုပ်နည်းနဲ့ပဲ လုပ်ချလိုက်တော့တာပါပဲ။
အကယ်၍သာ နည်းမှန်လမ်းမှန်များကို တခေါက်တခါလောက်များ တွေးကြည့်မိမည်ဆိုလျှင် တကယ့်ကို သားရွှေအိုး ထမ်းလာတဲ့မြင်ကိန်းပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ခံယူထားတဲ့ နအဖများဟာ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ သားတော်များဖြစ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာများရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို အလေးအနက် အမွန်အမြတ်ထားခဲ့မယ် ဆိုရင် . . .
"တို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ" ဆိုတဲ့ မေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်မှုဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ပြည်သူများကို လွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့သလို နအဖဆိုတဲ့ လူ့အန္ဓ၊ လူ့ဗာလ များကို လွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် . . .
အခုများတော့ . . .
ဒီဘ၀၊ ဒီခဏတာ ရာထူး၊ အာဏာ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ တည်မြဲဖို့အတွက် ဒီဘ၀မှာ ပူပင်သောက ကြောင့်ကျစိတ်တွေနဲ့သာ အသက်ရှင်ကြရတော့မယ့်၊ ဘ၀သံသရာမှာ အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံး အကုသိုလ် အကျိုးဆက်တွေသာ ခံစားကြရတော့မယ့် လူမိုက်၊ လူ့အန္ဓများအတွက် မေတ္တာမပွားနိုင်သော်ငြား ကရုဏာများ ပို့လွှတ်လျက် ရှိပါကြောင်း။
Posted by freeburma at 2:06 AM0comments
သီတဂူဆရာတော် ဟောကြားတော်မူတဲ့ လူမိုက်တို့သွားရာလမ်း တရားတော်မှ တရားကောက်နှုတ်ချက်များ
အားလုံးသော တရားချစ်ခင် သူတော်စင်များ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ အရပ်ဆယ်မျက်နှာ အနန္တစကြာဝဠာမှာ ရှိကြကုန်သော အနန္တသတ္တ၀ါတွေ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြစေဖို့ အားလုံး မေတ္တာဓာတ်တွေ ပို့လွှတ်ကြရမယ်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေ။
မေတ္တာနှလုံး ကိုယ်စီသုံး ရွှင်ပြုံးကြပါစေ။
မေတ္တာရန်သူ ဒေါသမူ အပူကင်းပါစေ။
မေတ္တာရေစမ်း ကိုယ်စီဖြန်း အေးချမ်းကြပါစေ။
ခန္ဓီ၏ရန် ဒေါသမှန် တွန်းလှန်နိုင်ပါစေ။
ခန္ဓီနှလုံး အစဉ်သုံး ရွှင်ပြုံးကြပါစေ။
တို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
သူတော်ကောင်းတွေ ကောင်းမှုကိုပြုဖို့ရန် လွယ်တယ်။ သူတော်ကောင်းတွေ မကောင်းမှုကိုပြုဖို့ရန် ခက်တယ်။
လူမိုက်တွေ မကောင်းတာ လုပ်ဖို့ရန် လွယ်တယ်။ လူမိုက်တွေ ကောင်းတာ လုပ်ဖို့ကျတော့ ခက်နေလိမ့်မယ်။
ကံချွတ်ချော်ချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် သတ္တ၀ါတွေဟာ နည်းလွဲနည်းမှားတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ဆိုပြီးတော့ လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီလို လုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် ပျက်စီးဖို့တော့ ဦးတည်နေပြီ။
၁။ နည်းမှားတွေကို လုပ်တယ်။
၂။ သူတပါးကိုလည်း အဲဒီအမှားတွေ လုပ်ခိုင်းတယ်။
၃။ အဲဒီ နည်းမှားကြီးတွေကို သိပ်တန်ဖိုးထားတယ်။
၄။ မှားနေပြီလို့ ပြောရင် ပြောတဲ့သူကို ရန်ရှာတယ်။
၁။ လူမိုက်ကို မမြင်ပါရစေနဲ့။
၂။ လူမိုက်ဘယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မကြားပါရစေနဲ့။
၃။ ရှောင်မရလို့ မြင်နေရ၊ ကြားနေရရင် အပေါင်းအသင်း မလုပ်ပါရစေနဲ့။
၄။ ရှောင်မရလို့ အပေါင်းအသင်း လုပ်နေရရင်လည်းပဲ သူတို့နဲ့ စကား မပြောပါရစေနဲ့။
၅။ မရှောင်သာလို့ ပြောရရင်လည်း သူတို့စကားကို အားပေးထောက်ခံမှုတွေ မလုပ်ပါရစေနဲ့။
Posted by freeburma at 4:45 PM0comments
ဒါတွေဟာ မင်းကြောင့်လို့ ၀ိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ကြတဲ့အခါ
မင်းဟာ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
အားလုံးက မင်းကို မယုံသင်္ကာဖြစ်လာတဲ့အခါ
သူတို့ကို နားလည်စွာ ခွင့်လွှတ်ရင်းနဲ့
မင်းကိုယ်မင်း ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင် . . .
အဲဒီအတွက်လည်း မမောမပန်း နေနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
မင်းရဲ့အကြောင်း မဟုတ်မတရား မုသားစကားကြားရတဲ့အခါ
မင်းကလည်း အလိမ်အညာတွေနဲ့ မတုန့်ပြန်ဘူးဆိုရင် . . .
မင်းကို လူတကာက ၀ိုင်းဝန်းမုန်းတီးတဲ့အခါ
မင်းကလည်း အမုန်းတွေ ပြန်မပွားဘူးဆိုရင် . . .
စိတ်ကူးနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
တွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
အောင်မြင်မှုသုခနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဒုက္ခတွေကို ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ
ခံယူထားနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
မုသားအဖြစ် ထောင်ချောက်ဆင် ညစ်တဲ့အခါ
မင်းဟာ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ နာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို
အင်မတန်မှသေးငယ်တဲ့ တန်ဆာပလာ အရာရာနဲ့
ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
တလှည့်တခါတည်းနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် . . .
အစကနေ ပြန်စနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
ဘယ်သောအခါမှ ညည်းညူမနေဘူးဆိုရင် . . .
အားနဲ့မာန်နဲ့ ဇွဲသတ္တိရှိရှိ ဆက်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
မင်းမှာ စိတ်အင်အားကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့တဲ့အခါ
လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ထားနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ ပြောဆိုတဲ့အခါ
ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
မာန်၊ မာန သွေး မကြွဘူးဆိုရင် . . .
မင်းကို နာကျည်းအောင် မလုပ်နိုင်စေရင် . . .
စွဲလမ်းမှု သံယောဇဉ်တွေ ထားမနေဘူးဆိုရင် . . .
တိုတောင်းလှတဲ့ မပစ်ပယ်နိုင်တဲ့ တမိနစ်အတွင်းမှာ
အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ စက္ကန့်ခြောက်ဆယ်အဖြစ် အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
မင်းဟာ အရာရာရှိတဲ့ အရာရာဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လို့
အရာရာ ဘာမဆို မင်းစွမ်းနိုင်ပြီပေါ့
အဲဒီတော့ မင်းဟာလည်း ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပဲပေါ့။ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ NLD လူငယ်များအား ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အမှာစကားပြောကြားရင်း ဒီ IF ကဗျာကို ပြန်ဆိုပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(by Rudyard Kipling)
Posted by freeburma at 2:05 PM0comments
Labels: If (အကယ်၍), Poem
အများစု ဆန္ဒ စု ဆန္ဒ
ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ယာ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ
'စု' က ပန်ကြား ကမ္ဘာတလွှား။
ပြည်သားကောင်းပီသ ကြွေးကြော်ကြ . . .။
(၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ထုတ်ဝေသည့် သစ္စာတော်လှန်ရေး မဂ္ဂဇင်းမှ -)
Posted by freeburma at 3:56 PM0comments
Posted by freeburma at 8:32 AM0comments
Text of Daw Aung San Suu Kyi's Statement
Following is the text of the statement by Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi, released Thursday by U.N. envoy Ibrahim Gambari.
I welcome the appointment on 8 October of Minister Aung Kyi as minister for relations. Our first meeting on 25 October was constructive and I look forward to further regular discussions. I expect that this phase of preliminary consultations will conclude soon so thatameaningful and timebound dialogue with the SPDC leadership can start as early as possible.
In full awareness of the essential role of political parties in democratic societies, in deep appreciation of the sacrifices of the members of my party and in my position as General Secretary, I will be guided by the policies and wishes of the National League for Democracy. However, in this time of vital need for democratic solidarity and national unity, it is my duty to give constant and serious considerations to the interests and opinions of as broadarange of political organizations and forces as possible, in particular those of our ethnic nationality races.
I believe that stability, prosperity and democracy for my country, living at peace with itself and with full respect for human rights, offers the best prospect for my country to fully contribute to the development and stability of the region in close partnership with its neighbors and fellow ASEAN members, and to playapositive role asarespected member of the international community."
ဗမာဘာသာဖြင့် အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီမှတဆင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြေညာချက် စာသားအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလို အခါသမယမှာ ကျမဘက်က တလျောက်လုံး အပြည့်အ၀ ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြသော ပြည်တွင်းပြည်ပ အင်အားစုများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် မယိမ်းမယိုင် ထောက်ခံပေးနေသော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းကိုလည်း ကျမ အထူး ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါသည်။
အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်အား ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းကို ကျမ ကြိုဆိုပါသည်။ အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကျမတို့၏ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံမှုသည် အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။ ရှေ့တွင် ပုံမှန် ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့ ကျမ မျှော်လင့်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝ၍ အချိန်ကန့်သတ်မှုများ ပါဝင်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ စောနိုင်သမျှ အစောဆုံး စတင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ယခုကဲ့သို့သော ပဏာမအဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများသည် မကြာမီ ပြီးမြောက်သွားမည်ဟုလည်း ကျမ မျှော်လင့်ထားပါသည်။
တမျိုးသားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ကျဉ်းသွားရန် အလို့ငှာ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကျမ အသင့်ရှိနေပါသည်။ ယင်းသို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ အောင်မြင်ရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ကုလသမဂ္ဂ၏ လိုအပ်သော အခန်းကဏ္ဍများကိုလည်း ကျမ ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ ပါဝင်ရမည့် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍကို အပြည့်အ၀ သိရှိနားလည်ခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကျမတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင်များ၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှုများကို အလေးအနက် တန်ဖိုးထားသောအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဖြင့် လည်းကောင်း ကျမသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ မူဝါဒများကို အပြည့်အ၀ လေးစားလိုက်နာ ခံယူပါမည်။ သို့စေကာမူ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအားလုံး သွေးစည်းခိုင်မာမှုနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အရေးတကြီး လိုအပ် နေသော ယခုအချိန်မျိုးတွင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၊ အထူးသဖြင့် ကျမတို့၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ အားလုံး၏ ဆန္ဒသဘောထားများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို အခိုင်အမာ အဆက်မပြတ် အလေးအနက်ထားကာ စဉ်းစားပေးရမည်မှာ ကျမအပေါ် ကျရောက်လာသော တာဝန်ဖြစ်နေပါပြီ။
ယင်းရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် ကျမသည် အပြုသဘောဆောင်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းကို အကောင်အထည် ဖော်သွားရန် ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အစိုးရအား လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအား လည်းကောင်း၊ ကျမနှင့်အတူ လက်တွဲကြိုးပမ်းကြပါရန် ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါသည်။
ကျမတို့နိုင်ငံတွင် အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှု၊ သာယာဝပြောမှု၊ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းမှုတို့ဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရရှိခံစားက ပြည်သူအပေါင်း ငြိမ်းချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် ကျမတို့နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် လည်းကောင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများနှင့် လည်းကောင်း၊ ပိုမိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို အကောင်းဆုံး အကျိုးပြုနိုင်မည်။ ထို့ပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိသားစုကြီးတွင်လည်း အများက လေးစားခြင်းခံရသော အဖွဲ့ဝင်တစ်နိုင်ငံအဖြစ် ပါဝင်အကျိုးပြုနိုင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ၀င်ရောက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဟု ကျမ ယုံကြည်ပါသည်။
Posted by freeburma at 11:01 PM0comments
Labels: Burma Icon DASSK
Remarkable Words from Gandhi Film
Mr. Gandhi said :
I'm asking you to fight. To fight against their anger, not to provoke it.
We will not strikeablow. But we will receive them.
And through our pain, we will make them see their injuctice.
And it will hurt as all fighting hurts.
But we cannot lose. We cannot.
They may torture my body, break my bones, even kill me.
Then …. They will have my dead body, not my obedience.
Posted by freeburma at 10:30 AM0comments
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက် (စုစည်းမှု-၅)
၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက်နေ့တွင် ဖဆပလ ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တင်သွင်းခဲ့သည့် ညီညွတ်ရေးအဆို မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်
ကျနော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုလွတ်လပ်ရေးကို အမြဲတမ်း သစ္စာမဖောက်ဘဲ လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပဋိညာဉ်ကတိ ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီလို ပဋိညာဉ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ညီညွတ်ရေးအဆိုကို တင်သွင်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ကာ လွတ်လပ်ရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာ တတိုင်းတပြည်လုံး သွေးစည်းပြီး စည်းစည်းလုံးလုံး အလုပ်လုပ်မှ ဖြစ်နိုင်မှာမို့ပဲ။ ဒီလိုမလုပ်ရင် ညီညွတ်ရေး မရဘူး။ မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး လွတ်လပ်ရေးဟာ ကျကျနန မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် ညီညွတ်ရေးကို ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း လုပ်တဲ့သူတွေ၊ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်က ညီညွတ်ရေးကို ဖြစ်မြောက်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင် ခုန တိုင်းပြည်အတွက် လူမျိုးအတွက် အင်မတန် အသက်စွန့်စားပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားကြတဲ့ သူတွေကို သစ္စာဖောက်ရာ မလေးစားရာကျမှာမိုလို့ ဒီညီညွတ်ရေးအဆိုကို ကျနော်တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနေအခါမယ် ဗမာပြည်ဟာ ဘာအလိုဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် ညီညွတ်ရေးလိုတယ်။ ဘာကြောင့် ညီညွတ်ရေး လိုသလဲ။ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်ဟာ အာဏာပိုင် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ကြီး ခေါ်၍ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသော အခြေအနေမျိုး ဆိုက်ရောက်အောင် (၀ါ) လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးဆိုတော့ကာ ကျနော်တို့ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ တည်ထောင်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကြီးကို တည်ထောင်ရမယ်။ အဲဒီ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ကြီးက လွတ်လပ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်တဲ့အခါ ကျရင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ အစီအစဉ်တွေ စီမံရမယ်။ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကို ဘာစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်မှာလဲ။ သမ္မတစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်မလား။ ဘယ်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုတိုင်းပြည်မျိုး ထူထောင်မလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ စီစဉ်ရမယ်။ အဲဒီလို စီစဉ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ လွတ်လပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာ ပေါ်လာမယ်။
ဒီတော့ကာ ညီညွတ်ရေးဟာ အချိန်အခါအလိုက် ဒီတိုင်းပြည် ဒီလူမျိုးရဲ့ အကျိုးကို အကြီးဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် လက်နက်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ညီညွတ်ရေးဆိုတာဘာလဲ နားလည်ဖို့လိုတယ်။ ဒီတော့ကာ ဒီအပိုဒ် ဒီဝါကျမှာ ညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်း သရုပ်ဖော်ပြထားတယ်။ တူညီသောအကျိုး၊ တူညီသောအလုပ်၊ တူညီသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်။ ကျနော်တို့ ညီညွတ်ရေးဆိုတာ ဘာအတွက် ညီညွတ်ရမှာလဲ။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ညီညွတ်ရမှာလဲ။ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ ရှိရမယ်။ ညီညွတ်ရေးဆိုတာ ဘာအတွက် ညီညွတ်ရမှာလဲ။ ရာထူးယူဖို့ ညီညွတ်ရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကကို နှိပ်စက်ဖို့ ညီညွတ်ရမှာလား။ ဘာအတွက် ညီညွတ်ရမှာလဲ။ အဲဒီတော့ကာ ကျနော်လိုချင်တဲ့ ညီညွတ်ရေးက တတိုင်းတပြည်လုံး လူတမျိုးလုံးရဲ့ လွတ်လပ်ရေး၊ လူတမျိုးလုံးရဲ့အကျိုး၊ အဲဒီလို တူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တူညီတဲ့အကျိုး၊ တူညီတဲ့အလုပ် အဲဒါတွေကိုရအောင်၊ အဲဒီလို တူညီတဲ့အကျိုး တိုင်းသူပြည်သားရအောင်၊ တူညီတဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ညီညွတ်ရေးမျိုး ဖြစ်ရမယ်၊ ပါးစပ်ကပြောရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ပါးစပ်က ညီညွတ်ချင်ပါတယ် ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ အလုပ်မှာလည်း တူရမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်လည်း တူရမယ်။ အဲဒါမျိုးကိုမှ ညီညွတ်ရေးလို့ ခေါ်ထိုက်တယ်။
Posted by freeburma at 5:13 PM0comments
Labels: Bogyoke's Quotations
Bogyoke's Quotations (5)
Burma Icon DASSK (6)
DASSK's Speech (1)
Fight On (14)
If (အကယ်၍) (1)
In Quest of Democracy (4)
NLD's Standing (1)
Talking With ............ (2)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းများ...
အတူတူမျှဝေခံစား တို့အင်အား သမိုင်းထဲကရက်စွဲများ Public Enemies ကိုရန်အောင် မကြီးသဒ္ဒါ ဆရာမ မေငြိမ်း မမ ခင်မင်းဇော် ကိုကဒေါင်း ကိုနစ် ကိုထိုက် ကိုဇေ ကိုပု ကိုဝေ ကိုသင့်ခ်ကင်း ၉၆ မျိုးဆက် ညလေး ညီမလေး လင်းလက် (မ)မေဓာဝီ (ကို)ကလိုစေးထူး ဆက်ဖော်ပြပါမည်
....... Choose Carriers ....... Burma Today DVB Hittaing Irrawaddy Khitpyaing Mizzima Moemaka Yoma3